Free fanompoana an-tserasera. Kajy fototra ny esory
Esory kajy fototra ara-nofo
sary sehatra 1: 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mamaritra ny karazana fototra
safidy 4 safidy 5
Marindrano andalana G 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mitsangana trano fisotroana V 0 1 2 3 4 5
Mampifandray tehina Z 0 1 2 3 4 5
Ny savaivony ny miditra tsimoramora D
Ny hatevin'ny ny zana-kazo ho formwork T
Ny halavan'ny amin'ny birao L
Ny sakan'ny ao amin'ny birao E
Ny firafitry ny simenitra
Weight isan-kitapo K
Kitapom ho 1 metatra toratelo ny simenitra F
Ampahany amin'ny simenitra ny lanjan'ny
simenitra : fasika : torotoro fo vato
Ampidiro ny vidin'ny fitaovam-panorenana
simenitra (isan-kitapo) M
fasika (ny 1 taonina) P
torotoro fo vato (ny 1 taonina) B
Board (ny 1 metatra toratelo) W
Fittings (ny 1 taonina) N
X - ny sakan'ny ny fototra
Y - fototra lavany
A - ny sakan'ny ny fototra
H - haavon'ny fototra
C - lavitra ny axis ny tetezana
S - dia monja no anelanelako zavatra simika
G - Marindrano andalana
V - Mitsangana trano fisotroana
Z - Mampifandray tehina
Ny ilaina habetsahan'ny simenitra ho an'ny fanamboarana ny iray metatra toratelo amin'ny simenitra samy hafa isaky ny raharaha.
Izany dia miankina amin'ny karazana simenitra, ny tiana kilasy ny simenitra vokatra, ny habeny sy ny mahavita mandrefy fillers.
Voalaza ao amin'ny kitapo.
Tsy ilaina ny hamerina ny zava-dehibe, ny tetiky ny trano mba kajy ny habetsahan'ny fitaovana ho an'ny fototry ny trano.
Satria ny vola lany ny fanorenana monolithic tonga ny ampahatelon'ny ny lanjan'ny ny trano.
Izany asa izany dia hanamora ny drafitra-taona sy ny ao an-trano ny ambany rihana. Hanampy anao hanao kajy ny habetsahan'ny mivaingana fanamafisana, shuttering zana-kazo ho amin'ny fitaovana fototra lavalava.
Inona no azonao ianarana:
Dian-tongotra ny fototra (ohatra, mba hamaritana ny habetsahan'ny tantera-drano mba handrakotra ny vita ambany rihana)
Habetsaky ny simenitra ho an'ny ny fototra sy ny tany slabs na fandrarahana ny gorodona lakalin'ny (izay mitranga mba hahafinaritra, raha, noho ny fototra fahadisoana amin'ny fampitomboana Tsy ampy ny azo tsapain-tànana)
Fanamafisana - ny isan'ny valves, mandeha ho azy ny ny lanjan'ny kajy, mifototra amin'ny lavany sy ny savaivony
Formwork faritra sy ny habetsahan'ny hazo amin'ny metatra toratelo sy manorotoro
Ny faritra rehetra surfaces (fa ny kajy ny tantera-drano ny ambany rihana) sy ny lafiny surfaces sy lehilahy iray tena ratsy
Kajy koa ny vidin'ny fitaovam-panorenana ny fototra.
Toy izany koa no manao ny fandaharana sary fototra.
Manantena aho fa ny fanompoana dia ilaina ho an 'ireo izay manorina ny fototry ny tànany, ary ny matihanina-mpanao trano.
Arakaraka sy be ny simenitra, fasika sy vatokely ny fanaovana simenitra nomena ny Default boky, araka ny nampirisihin'ny tamin'ny mpanamboatra ny simenitra.
Ary koa ny vidin'ny simenitra, fasika, vatokely.
Na izany aza, ny firafitry ny vita simenitra dia mafy ny haben'ny miankina amin'ny taharo fototry ny torotoro fo vato na vatokely, simenitra marika, ny freshness sy fitehirizam-bokatra ny toe-piainana. Dia fantatra fa very ela fitahirizana simenitra ny fananana, ary amin'ny avo simenitra hamandoana tsara deteriorates haingana.
Mariho fa ny vola lany ny fasika sy vatokely no voalaza ao amin'ny fandaharam-1 taonina. Nanambara ihany koa ny mpivarotra ny vidin'ny metatra toratelo isan-ny fasika, vato kivy na vatokely.
Ny anjara ny fasika dia miankina amin'ny ny fiandohany. Ohatra, renirano fasika dia manoatra noho ny asa.
1 metatra toratelo 1200-1700 milanja kilao ny fasika, eo ho eo - 1500 kg.
Amin'ny vatokely sy ny korontam-bato sarotra. Araka ny loharanom-baovao isan-karazany 1 metatra toratelo lanjan'ny tamin'ny 1200 ny 2500 kilao arakaraka ny habeny. Mavesatra - mihoatra noho ny tena.
Ka manisa ny vola lany isan-taonina ny fasika sy vatokely, na dia mety tsy maintsy mamaritra ny mpivarotra.
Na izany aza, dia mbola manampy ny kajy hahalala ny vinavinaina ho fitaovam-panorenana ny vola lany noho ny handrotsahana ny fototra. Aza hadinoina ny knitting tariby hafa fittings, fantsika na screws ho an'ny casing, ny fanaterana ny fitaovana fanorenana, ny vidin'ny excavation sy ny asa fanorenana.